Fibromyalgia sy ny kitron'ny tongotra Antony, fandrefesana tena, fitsaboana ary fanatanjahan-tena
BOKY APPOINTMENT (Mitadiava Clinic)
aretin-kozatraLahatsoratra momba ny Fibromyalgia Fibromyalgia dia aretina mitaiza fanaintainana izay matetika manome ny fototry ny soritr'aretina isan-karazany sy famantarana ara-pahasalamana. Eto ianao dia afaka mamaky misimisy kokoa momba ireo lahatsoratra isan-karazany nosoratanay momba ny fibromyalgia momba ny fanaintainana mitaiza - ary tsy ny kely indrindra ny karazana fitsaboana sy ny fizakan-tena azon'ity diagnostika ity. Fibromyalgia dia fantatra koa amin'ny hoe rheumatism malefaka. Ny toe-javatra dia mety hiteraka soritr'aretina toy ny fanaintainana maharitra amin'ny hozatra sy ny tonon-taolana, havizanana ary fahaketrahana.
Sakafo sy sakafoMahaliana ny vokatry ny sakafo amin'ny fahasalamanao? Eto ianao dia hahita lahatsoratra ao amin'ny sokajy sy ny sakafo amin'ny sokajy. Miaraka amin'ny sakafo dia ahitana fanafody ampiasaina amin'ny fandrahoan-tsakafo mahazatra, anana, zavamaniry voajanahary, zava-pisotro ary lovia hafa.
Fanazaran-tena sy fanatanjahan-tena
Fibromyalgia sy ny kitron'ny tongotra
11 / 01 / 2021 /i aretin-kozatra, rheumatism /av loza
Voan'ny aretin-tongotra ve ianao? Ny fikarohana dia naneho fa ireo izay manana fibromyalgia dia manana aretina mitombo avo kokoa amin'ny tongotra. Amin'ity lahatsoratra ity dia mijery akaiky kokoa ny fifandraisana misy eo amin'ny fibromyalgia sy ny kitron'ny tongotra.
Ny fikarohana dia mampifandray izany amin'ny karazana fanaintainana fibromyalgia antsoina hyperalgesia (1). Fantatsika koa taloha fa ny fandikana ny fanaintainana dia matanjaka kokoa amin'ireo tratran'io aretina miteraka fanaintainana io. Ny fandinihana fandinihana rafitra dia nanondro fa mety noho ny fiasan'ny rafi-pitabatabana ao amin'ity vondrona marary ity (2).
Torohevitra tsara sy haingana: Eo amin'ny farany ambanin'ny lahatsoratra dia afaka mijery horonantsary misy fanazaran-tena amin'ny fanaintainan'ny tongotra ianao. Manome torohevitra momba ny fandrefesana tena ihany koa izahay (toy ny ba kiraro famoretana zanak'omby og ba kiraro famoretana plantar fasciitis) ary super-magnésium. Misokatra amin'ny varavarankely vaovao ny rohy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho fantatrao bebe kokoa momba:
Inona avy ireo kitron'ny tongotra?
Hyperalgesia sy Fibromyalgia
Ny fifandraisana misy eo amin'ny Fibromyalgia sy ny kitron'ny tongotra
Fanapahan-tena manoloana ny kitron'ny tongotra
Fanatanjahan-tena sy fanofanana miady amin'ny fikorontanan'ny tongotra (ao anatin'izany ny VIDEO)
Ny kitron'ny tongotra dia mety hitranga mandritra ny andro sy amin'ny alina. Ny mahazatra indrindra dia ny fisehoan'alina amin'ny alina aorian'ny hatoriana. Ny kitron'ny hozatra ao amin'ny zanak'omby dia miteraka fihenan'ny herin'ny zanak'omby tsy tapaka, tsy fidiny ary maharary. Ny cramp dia mety hisy fiantraikany amin'ny vondrona hozatra iray manontolo na amin'ny ampahany amin'ny hozatry ny zanak'omby ihany. Ny fizarana dia maharitra hatramin'ny segondra ka hatramin'ny minitra maromaro. Rehefa mikasika ny hozatra voakasik'izany dia ho tsapanao fa sady maratra ny tsindry no mampihenjana azy io.
Ny fanintona toy izany dia mety manana antony maro samihafa. Ny tsy fahampian-drano, ny tsy fisian'ny elektrolita (ao anatin'izany ny maneziôma), ny hozatry ny zanak'omby be loatra sy ny hozatra hyperactive (toy ny amin'ny fibromyalgia) ary ny fikitika ny hozatra any aoriana no mety ho antony rehetra. Ny fananana fahazarana mamelatra ny hozatry ny zanak'omby alohan'ny hatory dia afaka manampy amin'ny fihenan'ny tranga. Fepetra hafa toa ny famatrarana ba kiraro mety ho fepetra mahasoa ihany koa hampitombo ny fivezivezen'ny rà ao amin'ilay faritra - ary amin'izany dia manampy amin'ny fisorohana ny fanintona (misokatra amin'ny varavarankely vaovao ny rohy).
Tamin'ny fampidirana ny lahatsoratra dia nifanaraka izahay fa ny fandinihana dia nanambara fa tsy miasa loatra ao amin'ny rafi-pitabatabana amin'ireo voan'ny fibromyalgia (1, 2). Ny tena manokana dia midika izany fa ny rafi-pitabatabana peripheral dia mandefa famantarana be loatra sy mahery loatra - izay avy eo dia mitarika amin'ny mety ho fialan-tsasatra ambonimbony kokoa (ny habetsaky ny hetsika ao amin'ny hozatra) ary noho izany dia misy fihenam-bidy izay miafara amin'ny fahatairana. Noho ny zava-misy dia hita ihany koa fa ny ivon'ny fandikana fanaintainana ao ny atidoha dia tsy manana «sivana fanaintainana» mitovy, amin'ireo manana fibromyalgia, mihamafy ihany koa ny hamafin'ny fanaintainana.
- Ny kitron'ny tongotra Noho ny fambara diso?
Inoana koa fa ny rafi-pitabatabana be loatra amin'ireo izay manana fibromyalgia dia mety hiteraka soritr'aretin'ny hadisoana ao amin'ny hozatra, izay mety hitarika fihenam-bidy sy famoretana an-tsitrapo.
Ny fifandraisana misy eo amin'ny tongotra kitroka sy Fibromyalgia
Rafitra be loatra miasa be loatra
Fanasitranana miadana kokoa
Fihetseham-po mitombo amin'ny tisu malemy
Ireo izay manana fibromyalgia dia manana fitomboan'ny fihenan'ny hozatra, ary koa ny rafi-pitabatabana peripheral 'hyperactive'. Mahatonga hozatra sy hozatra izany. Raha mijery akaiky ny toe-javatra hafa mifandraika amin'ny fibromyalgia isika - toy ny aretim-bavony mora mampahory - avy eo hitantsika fa io koa dia karazana spasm hozatra, fa amin'ity tranga ity dia momba hozatra malama. Ity dia karazana hozatra izay tsy mitovy amin'ny hozatra taolana, satria hitantsika voalohany ao amin'ny taova tsinay ao amin'ny vatana (toy ny tsinay). Ny fiasa be loatra amin'ity karazan-tavy hozatra ity dia, toy ny hozatra amin'ny tongotra, dia hitarika fihenam-bidy an-tsitrapo sy fahasosorana.
Ny iray manana fibromyalgia dia mila fitomboan'ny rà mandriaka hitazomana ny fiasan'ny hozatra ara-dalàna amin'ny tongotra. Izany dia satria ny fiasan'ny hozatra avo dia mitaky fitakiana ambony kokoa amin'ny fidirana amin'ireo electrolytes ao amin'ny lalan-dra - toy ny manezioma (vakio bebe kokoa momba ny super-magnesium eto) sy ny calcium. Betsaka noho izany no mitatitra ny fihenan'ny kitron'ny tongotra miaraka amin'ny ba kiraro famoretana zanak'omby sy manezioma. Manezioma no hita ao endrika famafazana (izay ampiharina mivantana amin'ny hozatry ny zanak'omby) na amin'ny endrika takelaka (ao koa atambatra amin'ny calcium).
Manezioma dia afaka manampy ny hozatra mihenjana hilamina. Ny fampiasana ba kiraro famindrana dia manampy amin'ny fitazonana ny fivezivezena - ary amin'izany dia mampitombo ny hafainganan'ny fanamboarana amin'ny hozatra marary sy mafy.
Ny fepetra manokana azonao raisina mba hampitomboana ny fivezivezy dia:
Fampiasana isan'andro ny ba kiraro famoretana zanak'omby (mandaitra amin'ny kitron'ny tongotra)
Fampiasana isan'andro ny Kitapo famoretana Plantar Fasite (raha sorena amin'ny kitrotro tongotra ianao)
Fanazaran-tena isan'andro (jereo ny horonantsary etsy ambany)
Fitsaboana ny kitron'ny tongotra
Misy fepetra fitsaboana mahomby maromaro ho an'ny kitron'ny tongotra. Ankoatra ny zavatra hafa, ny fiasan'ny hozatra sy ny fanorana dia mety hisy vokany miala sasatra - ary afaka manampy amin'ny famahana ny hozatra mihenjana. Ho an'ny olana maharitra sy sarotra kokoa, dia toy izany koa shockwave Therapy ho vahaolana mety. Ity dia karazana fitsaboana maoderina indrindra ary misy vokany voarakitra an-tsoratra tsara manoloana ny fivontosan'ny tongotra. Ny fitsaboana dia matetika ampiarahina amin'ny fanentanana ny valahana sy ny lamosina raha sendra misy tsy fetezana ao amin'ireto ihany koa - ary mety hiahiahy fa mety hisy ny fahasosorana amin'ny hozatra ao an-damosina izay manampy amin'ny olana amin'ny tongotra sy tongotra.
Sahirana amin'ny kitron'ny tongotra ve ianao?
Faly izahay manampy anao amin'ny fanombanana sy fitsaboana amin'ny iray amin'ireo toeram-pitsaboana mpiara-miasa aminay.
Ny toeram-pitsaboana mifandray
Fanatanjahan-tena sy fanofanana miady amin'ny fikorontanan'ny tongotra
Ny fampihetseham-batana manampy amin'ny fanamafisana ny tongotra, ny kitrokely ary ny tongotra dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fivezivezy ao amin'ny ranjo ambany. Izy io koa dia afaka manampy anao hanana hozatra matevina sy azo ovaina kokoa. Ny fanazaran-tena any an-trano dia azo tendren'ny mpitsabo aretin-tsaina, mpitsabo aretin-tsaina na mpitsabo manokana momba ny fahasalamana mifandraika amin'izany.
Ao amin'ny horonantsary etsy ambany dia azonao atao ny mahita programa fanazaran-tena izay atolotray ho an'ny kitron'ny tongotra. Fantatray fa ny programa dia mety antsoina hoe zavatra hafa, fa ny zava-misy manampy amin'ny fisorohana ny fanaintainana amin'ny kitrokely dia hita ihany koa ho toy ny bonus. Aza misalasala mifandray aminay ao amin'ny faritra misy hevitra etsy ambany amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny fantsona Youtube anay raha manana fanontaniana izay tsapanao fa afaka manampy anao izahay.
Lahatsary: ​​Fanafody 5 hanoherana ny fanaintainana eo an-tongotra
Manjary anisan'ny fianakaviana! Aza misalasala misoratra anarana maimaim-poana amin'ny fantsona Youtube anay (kitiho eto).
Loharano sy fanovozan-kevitra:
1. Sluka et al, 2016. Neurobiology ny fibromyalgia sy ny fanaintainana miely maharitra. Neuroscience Boky 338, 3 Desambra 2016, Pejy 114-129.
2. Bordoni et al, 2020. Fihenan'ny hozatra. Pubmed. Treasure Island (FL): Fanontana StatPearls; 2020 Jan-.
Tianao ny lahatsoratrao? Mialà mari-pahaizana kintana
Zarao amin'ny Facebook
Zarao amin'ny Twitter
Zarao amin'ny Pinterest
Zarao amin'ny LinkedIn
Mizara amin'ny mailaka
https://www.vondt.net/wp-content/uploads/vondt-i-leggen.jpg 349 700 loza https://www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png loza2021-01-11 19:51:182021-01-11 19:51:18Fibromyalgia sy ny kitron'ny tongotra
Vondt.net dia toerana iray ara-pahasalamana ho an'ny toeram-pitsaboana Vondt momba ny aretin-kozatra ary nomen'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana.
Ny Wound Clinics dia tambajotra matihanina, manana mpanjohy mihoatra ny 60000, amin'ny toeram-pitsaboana izay manam-pahaizana momba ny aretin-kozatra. Azonao atao ny mahita ny iray amin'ireo klinika aminay na ny klinika fatra-manasa iray akaiky anao eo ambanin'ny rohy "FIND A CLINIC".
Te hanana tombana sy fanampiana amin'ny fanaintainanao ve ianao? Press eto hahita ny toeram-pitsaboana sy mpiara-miombon'antoka aminy.
Sokajy Safidio ny sokajy Fitsaboana hafa Annet Osteoarthritis (Osteoarthritis) Hirotsaka syrup fitsaboana anglisy ergonomics aretin-kozatra fikarohana tongotra Physiotherapy General vahiny Post hato- Fiantohana ara-pahasalamana Aretim-po sy vascular Head Hip Toetra amam-hoditra Chiropractic lohalika Sakafo sy sakafo fanampin-tsakafo Ny fanaintain'aretina Harerahana mafy / ME kalitao Articles Reader Question Fanafody Hozatra sy taolana vozony kozatra aretina Fanazaran-tena sy fanatanjahan-tena rheumatism miverina aretina hery panokafana Aretina sy ny aretin-dranomasina Aretina sy aretina mamelatra panokafana Training Uncategorized Vizana sy reraka
Fibromyalgia sy Plantar Fascitis WOMAC (Fanontaniana momba ny fandinihan-tena momba ny valan-javaboary sy ny lohalika amin'ny osteoarthritis)